Dagaalo xalay ka dhacay Muqdisho | www.maandeeq.webs.com/
Dagaalo xalay ka dhacay Muqdisho
Dagaalo xalay ka dhacay Muqdisho.
Friday 29 January 2010 09:16 AM…
Dagaal xooggan ayaa xalay qeybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho ku dhex mary Ciidamada Dowladda iyo Maleeshiyaadka ka soo horjeeda Dowladnimada.
Dagaaladaan ayaa xalay saqdii dhexe qarxay kadib markii kooxaha Dowladda ka soo horjeeda ay weerar ku soo qaaden dhowr fariismo oo ciidamada Dowladdu ku leeyihiin magaaladda muqdisho, waxayna dagaaladu soo gaareen saaka waaberigii, ayadoo qasaaraha ugu badanna uu gaaray dadka rayidka ah ee magaalada ku nool.
Lama xaqiijin qasaaraha dhabta ah ee uu geestay dagaalku madaama madaafiic dhowr ah ay ku dhecaysay qaybo kala duwan oo magaalada Muqdisho ka mid ah, hase ahaatee saraakiisha gurmadka deg dega ah ayaa tilmaamay in in dhaawaca 21 ruux ay geeyeen xarumaha caafimaadka ee magaalada.
Sidoo kale Afyeenka ciidanka Boosliska Soomaaliyeed g/sare C/laahi Xasan Bariise ayaa Radio Muqdidho u sheegay in madaafiic habow ah oo ay soo rideen kooxaha Dowladda ka soo horjeeda ay dhibaato gaarsiiyeen dad rayid ah oo ku nool degmada Waabari ee gobolkaan Banaadir.
Weerarkaan ay xalay soo qaadeen maleeshiyaadka Dowladda ka soo horjeeda ayaa qayb ka ah dagaalada aan natijada lahayn ee ay ka dhex wadaan dadka rayidka ah, ayagoo caadaystay madaafiic ay ka dhex tuura goobaha suuqyada, meelaha ay Bulshadu ku kulanto iyo weerarro ay daka ku miraan xiliyada habeenkii ah ee ay dadku hurdayaan.
Waxaana masuuliyadda dagaalladaan isku qabsaday maleeshiyaadka Shabaab iyo Xisbul islaam oo war koodu ku soo koobmay anaa dilay iyo anaa madfaca tuuray, si look ala badsado dhibaatada lagu hayo shacabka Soomaaliyeed ee muddada dhibaatada ku jiray.
Filed under: Dagaalo xalay ka dhacay Muqdisho, Uncategorized |
« Dad Soomaaliyeed oo laga sii daayay xabsiyadda dalka Greece. Faafaahin ka soo baxday dagaal culus iyo duqeeyn habeen barkii xalay ilaa saaka ka dhacay magaalada Muqdisho »